Sudan nyika yekutanga kuMiddle East kugashira mushonga weCOVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Sudan Kupwanya Nhau » Sudan nyika yekutanga kuMiddle East kugashira mushonga weCOVID-19
Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • Sudan Kupwanya Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Sudan yakava nyika yekutanga kuMiddle East neNorth Africa kugamuchira mushonga weCOVID-19 kuburikidza neCOVAX Facility.
Chekutanga madhizaizi achaenda kune vashandi vezvehutano uye vanhu vanopfuura makumi mana nemashanu vane chirwere chisingaperi.
Dhirivhari inotevera kuuya kwemazana mana ezviuru zvematani ejekiseni nemabhokisi ekuchengetedza, chikamu cheGavi-yakapihwa mari uye inotsigirwa mumatura epasirese akaunzwa neUNICEF akamiririra COVAX Facility.
Gurukota rezvehutano reSudan riri kukurudzira avo vanofanirwa kunyoresa uye kubayiwa jekiseni kana vangowana musangano.
Sudan yakagamuchira anodarika mazana masere ezviyero zvejekiseni reCOVID-800,000 kuMiddle East neNorth Africa (MENA) dunhu riri kupihwa neAstraZeneca. Mishonga yekudzivirira iyi yakaunzwa nerutsigiro rweUNICEF kuburikidza neCOVAX, mubatanidzwa unotungamirwa neWorld Health Organisation (WHO), Gavi, Global Vaccines Alliance, uye Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), iyo inovimbisa kugoverwa kwakaenzana kwe COVID-19 majekiseni ekudzivirira nyika zvisinei nemari dzavanowana.
Dhirivhari yacho inotevera kuuya kwemazana mana ezviuru zvematani ejekiseni nemabhokisi ekuchengetedza, chikamu cheGavi chakabhadharwa mari uye chakatsigirwa dura repasirese rakapihwa neUNICEF pachinzvimbo cheNzvimbo yeCOVAX Chishanu chapfuura, Kukadzi 4.5, 26, yakakosha pakubayiwa nhomba iyo Middle East. WHO yakashanda nevakuru venyika kuisa nzira yekubaya nhomba panzvimbo inosanganisira kudzidzisa majekiseni, kuona kuchengetedzwa kwejekiseni, uye kuongororwa kwemhedzisiro yakaipa.
Mutero wekutanga wekudzivirira watambirwa nhasi unotsigira kubayiwa kwevashandi vezvehutano nevanhu vanopfuura makumi mana nemashanu vane hutano husingaperi, vanogara munzvimbo dzine hutachiona hwepamusoro kana hutarisiro hwepamusoro, zvichiratidza chikamu chekutanga chemushandirapamwe wekudzivirira nyika.
Nekudzivirira vachengeti vezvehutano veSudan kutanga, vanogona kuenderera mberi vachipa masevhisi ekuchengetedza hupenyu uye nekuchengetedza hutano hunoshanda. Zvakakosha kuti vashandi vehutano vanochengetedza hupenyu hwevamwe vanotanga kuchengetedzwa.
Dr. Omer Mohamed Elnagieb, Gurukota rezvehutano reSudan, vakatenda vese vavakashanda navo kuSudan kuti vave nyika yekutanga mudunhu rese kuwana majekiseni ekurwisa COVID-19 kuburikidza neCOVAX Facility.
"Mishonga yekudzivirira zvirwere chikamu chakakomba chekudzora kupararira kwehutachiona muSudan uye pakupedzisira ichidzokera kuzvinhu zvakajairika," akadaro Dr. Omer Mohamed Elnagieb. Akakurudzira avo vanofanirwa kunyoresa uye kubaiwa majekiseni kana vachinge vawana musangano.
Pasi rose uye muSudan, COVID-19 yakanganisa kuunzwa kwemabasa akakosha uye inoramba ichitora hupenyu nekuvhiringidza raramo. Kubva musi wa1 Kurume 2021, Sudan yanga iine makumi maviri neshanu makumi mashanu nemakumi mashanu neshanu yakasimbisa nyaya dzeCOVID-28,505 uye 19 kufa kwakabatana, sezvo yekutanga kesi yeCOVID-1,892 yakaziviswa munaKurume 19, 13.
“Idzi inhau huru. Kuburikidza neCOVAX Facility, Gavi anovimbisa kuti nyika dzese dzine mukana wakaenzana wekuwana mishonga yekudzivirira hupenyu iyi. Tinoenderera mberi nekushandira kusasiya munhu shure nekudzivirira, ”akadaro Jamilya Sherova, Senior Country Manager weSudan kuGavi, iyo Vaccine Alliance.
"Tariro yedu yekunaya kubva kudenda iri kuburikidza nemishonga yekudzivirira," akadaro Abdullah Fadil, Mumiriri weUNICEF Sudan. "Majekiseni ekudzivirira akaderedza denda rezvirwere zvakawanda zvinotapukira, akaponesa mamirioni ehupenyu uye akabvisa zvinobudirira zvirwere zvakawanda zvinotyisa," akaenderera mberi.
Dr. Nima Saeed Abid, Mumiriri weWorld Health Organisation muSudan, vakasimbisa kuti majekiseni akagamuchirwa nhasi akachengeteka uye akatenderwa kuburikidza neWHO Emergency Use Listing Procedure yekushandisa muSudan nedzimwe nyika. Akarumbidza Hurumende yeSudan, iyo Federal Ministry yehutano uye vanobatsirana navo padanho rakakura rinozoona kuti vanhu veSudan vadzivirirwa kubva kuchirwere chinouraya chinoramba chichipararira.
“Sangano reWorld Health Organisation riri kufara kuve chikamu chezviitiko izvi pamhinduro yeCOVID-19 muSudan. Majekiseni anoshanda uye majekiseni anofanira kuva evose, ”akadaro Dr. Nima. "Asi tinofanira kugara tichirangarira kuti majekiseni anoshanda chete sechikamu chehurongwa hwakakwana - chishandiso chimwe chete mudura redu rekurwisa hutachiona uye anonyanya kushanda kana akabatanidzwa nehumwe hutano uye nzira dzekudzivirira."
Nekutsigirwa naGavi, UNICEF neWHO vachatsigira Hurumende yeSudan kuti ibudise chirongwa chekudzivirira uye kuronga zvirongwa zvekudzivirira nyika kuzosvika kuvanhu vese vane mishonga yekudzivirira.